Saron-tava miaro ambongadiny, mpanamboatra masom-bovoka Respirator | Kintana manga
Orinasa mamatsy vola vahiny ny orinasa manokana amin'ny famokarana sarontava miaro.
Saron-tava sy mpanohitra
Saron-tsarimihetsika sivily Ppe & Mpanohitra
Famokarana fitaovana manokana
Ny marika Blue Star manana vovoka, porofom-piarovana ho an'ny spaonjy ary anti-mikrotoxika ary saron-tava fiarovana amin'ny andiana landy novokarin'ny orinasa dia novokarina tamina fitaovana manokana, fiarovana mavesatra, tsara tarehy ary mateza.
Ny Blue Star marika vovoka, porofom-piarovana sy spaonjy anti-mikrotoxika ary saron-tava miaro landy novokarin'ny orinasa dia novokarina tamina fitaovana manokana, fiarovana mavesatra, tsara tarehy ary mateza; saron-tava respiratora, fiaramanidina lamba tsy misy tenona, saron-tava miaro telo-telo, saron-doha Lolo, KN95, saron-tava misy andian-kaopy, saron-tava andiam-panatanjahantena, saron-tava andiany misy porofo mangatsiaka, saron-tava mangarahara ary saron-tava fitsaboana hafa; eo amin'izy ireo, ny saron-tava misy refy telo an'ny ankizy dia natao somary maivana ary ny loko dia tsy voatery.
3 Maskidin'ny Ply Medical
Ireo akora fototra ampiasaina amin'ny Blue Star dia kanonà, baoty na plastika misy faribolana avo lenta. Ny safidy dia miankina amin'ny fampiasana, ohatra, anatiny na ivelany. Ny toetrandro koa dia manana anjara toerana lehibe toy ny toerana manana etona avo sy ny hamandoana. Ny QC sy ny rafitra fitantanana dia afaka miantoka kalitao ambony. Ny fampiasana an'ity vokatra ity dia manampy ny olona hampihena ny ora fiasana ary manampy hanamaivana azy ireo amin'ny asa mandreraka sy asa mavesatra.
KN95 / FFP2 Respirator azo ampiasaina
Topy fiarovana ara-pitsaboana
Saron-tariby telo lehibe tsy misy peo tenda
Topeng-telo miandalana tsy misy takolaka orona
Ny orinasa dia manana fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001, fahazoan-dàlana famokarana fitaovana fiarovana manokana, lisitra fiarovana fiarovana fitaovana manokana. Fahazoan-dàlana hamokatra fitaovana fitsaboana, taratasy fanamarinana fisoratana anarana fitaovana fitsaboana. FDA, fanamarinana CE, voatanisa ao amin'ny lisitra fotsy an'ny Minisiteran'ny Varotra, ny fanamarinana avy any ivelany ary ny fikambanan'ny Import sy Export Medical voasoratra anarana.
Nandritra ny 50 taona mahery, izy no niavian'ny indostrian'ny sarontava ao Fujian. Tsy hadinon'ilay mpanorina ny fikasany tany am-boalohany, tadidiny ny iraka nampanaovina azy, nitarihany ny vahoaka Blue Star handroso ary hiezaka hiaro ny ain'ny olona miasa eo amin'ny laharana voalohany. Tamin'ny taona 2020, tampoka ny trangan'aretina. Tsy nanadino ny toe-javatra nisy ny valanaretina ny vahoaka Blue Star ary be fitiavana ireo olona tsy masiaka. Ho valin'ny baikon'ny governemanta hanohy ny asany amin'ny andro voalohany amin'ny taona dia lasa orinasa mpividy sy fitehirizana lehibe ao amin'ny filankevi-panjakana izy ireo.
Kaomandy avy any Malezia
Kaomandy avy any Malezia: lolo manify manify, miaraka amina clip orona, lamba meltblown namboarina, miampy fitaovana nano, miaraka amina asa manokana. Fonosina tsirairay ao anaty harona plastika vita amin'ny plastika, izay misy rivo-piainana avo lenta.
Ny afovoan-vonjy taitra Czech no fitaovana saron-tava Nafu
Ny foibe vonjy maika any Czech dia misy saron-tava Nafu
Xiamen Blue Star Enterprise Co., Ltd. natsangana tamin'ny 1987.
Miantehitra amin'ny oniversite pharmaceutika China, University of Fujian Medical ary Qilu Medical College of Shandong University, ny orinasa dia nanangana ivon-toerana fikarohana siantifika sy teknolojia fiainana ao amin'ny Distrikan'i Xiang'an mba hanatsarana ny indostria ary hanitatra ny laharan'ny vokatra avy amin'ny sarontava miaro, voalohany- fitaovam-pitsaboana kilasy sy kilasy faharoa ho an'ny fitsaboana ara-pahasalamana kilasy fahatelo sy fitaovana fisorohana aretina toy ny fitaovana sy ny fanjifana, mamorona sehatra famokarana fitaovana ho an'ny fitaovana fitsaboana.